Mai Chibwe VekwaZimuto: Matinji anoita basa rei?
Mubvunzo wekuti "Matinji anoita basa rei unobvunzwa kuda katatu pavhiki imwe neimwe. Regai tiwedzere pane zvatakambotaura, kuda zvingabatsira vamwe vanongoramba vachibvunza. Kana uri munhukadzi uchishamisikawo kuti pamberi pako pakamira sei, tora MIRROR uise pasi wotonona wakanangisa pamberi pako pa MIRROR, wozviongorora kuti pako pakaira sei.
Wotarisa zvinhu zvakati wandei zvinoti
Buri rako reweti
Matinji ma lips asina choya akaurungana
Maromo akaita chikomo ane choya
Chitubu-Buri guru panobuda ropa kana uri kumwedzi. Ndipo pachapinzwa chombo nomurume kana wakura. Ndipozve pauchazvara mwana napo. Panokura zvokuti musoro nemafudzi emwana zvinokwana
Kozotiwo buri rinobuda netsvina kana waenda kuchimbuzi. Riri pedo pedo nechitubu chako (2cm kana usina kumbozvara, 3.5 kana wambozvara)
Pamberi pemunhukadzi pane maromo anova makuru pamatinji. Maromo anomera choya. Matinji haameri choya. Choya tinogera hedu asi basa racho kudzivirira guruva kuti risapinda pamberi nokuti rinokwanisa kuva nezvigwere. Mazuvano tinopfeka mabhurugwa, saka choya tofarira kugera zvokutoveura.
Matinji anoti kana akakwizirigwa zvinyoronyoro, anotanga kuzvimbirira, obudisa oiri yakatsetseka chose chose inotsvedza. Oiri iya yonyorovesa matinji zvese nepamberi pese. Kana murume opinza chombo kana kungokwizirira pamberi pese nechombo zviya zvokukunyemudza zviya zvinoitwa muchimbotamba, matinji anozvimba owedzera kubuda oiri iyoyo.
Matinji haana vasa kuti makuru here kana kuti madiki. Kunaka kwawo kumukadzi kwakasiyana siyana zvichibva mumafungire emukadzi pakuiswa kwake kwete kuti zvinobva pasaizi yematinji. Bodo.
Vakadzi vanokwanisa kuita ORGASM NOKUPINZWA CHOMBO vashomanana kuma 30% mupasi rese. Asi vanoita nokuda kwekutambiswa matinji nebhinzi vakawanda chose. Varume mukadzidza kuita zvese munenga magona chose. Kuti uku uri mukati uri kukoira uku uri kukwizirira matinji nebhinzi ndizvo chaizvo kana maitire achibvumdza. Iwewo muridzi wematinji, kana murume achishanda, fungwa yake yese iri pakunakigwa kwake, Isa maoko ako pakati uzvishande pamatinji ako. Kana wakafongora, unokwanisa kusvitsa ruoko pamatinji, zvinova zvinokuwedzera kufongora wotohwa chombo chomurume chogofa panga pasina kujaira kugofewa zvotowedzera kunaka.
Kunakigwa kwemurume nomukadzi
Ngatihwisisezve kuti hakuna mukadzi asina matinji. Kungosiyana saizi chete asi kuwanda kwemaNERVES kwakada kungofanana uye anopfuura 8000 pabhinzi chete paanosanga ese saka tingati uku neuku kune 4000. Murume pachombo pake pane kuma 4000. Kureva kuti mukadzi akabatwa zvakanaka anokwanisa kunakigwa kupfuura murume nokure.
Saka tati matinji anoita basa reiko
Kudzivirira zvakaipa zvingapinda pamberi
Kunakira mukadzi pakuiswa
Kuvaka pamberi kuti pave panova zvapakaita.
Posted by Mai E Chibwe at 16:29